Malaha Waxaad Waqti Badan Ku Bixineysaa Maareynta Macluumaadka Ka Badan Suuqgeynta | Martech Zone
Isniin, April 17, 2017 Arbacada, Janaayo 27, 2021 Douglas Karr
Shalay, waxaan la wadaagey sida aan dufanka u rarney an sanadka oo dhan ee cusbooneysiinta bulshada. In kasta oo xoogaa shaqo ah ay galeen cilmibaarista, kooxdayadu waxay dhowr saacadood ku qaadatay oo keliya duugista xogta oo laga dhigay fayl la soo rogi karo. Xitaa ka dib markaan ka gudubnay dhammaan hubinta ansaxinta, waxay ahayd inaan markaa gacanta ku dhex marno oo aan dooranno ama ku darno warbaahinta si aan ugu muujino cusbooneysiin kasta oo bulsheed. Waxay qaadatay dhowr saacadood si loo saxo oo loo saxo.
Maanta, waqtigeygu wuxuu qaatay inaan qaato dhowr xilli oo dhacdooyin ah oo aan u soo dhoofiyo barta macaamiisha ee WordPress oo leh nidaam isku dhafan oo maarayn dhacdooyin xirfad leh. Nasiib darrose, in kasta oo dawannada iyo foorida lagu daro nidaamka, haddana waxay weli ku tiirsan tahay bani'aadamnimada oo fadhiya kursiga hore ee kumbuyuutarka oo buuxinaya faahfaahin kasta oo aan caadi ahayn iyo soo saarista nooc kasta oo ah dhacdo dhacdo caado ah. Waxay qaadatay maalintii oo dhan.
Labadan tusaalooyinba, xogtu waxay ahayd mid labadaba la heli karay loona qaabeeyey faylalka xogta la isticmaali karo. Xaaladdan oo kale, labaduba waxay ahaayeen faylal qoraal-ku-saleysan qiimo-ku saleysan. Si kastaba ha noqotee, labadaba barnaamijyada 'Martech' waxay lahaayeen xaddidaadyo adag oo ku saabsan awooddooda xog soo gelinta. Waqti iyo waqtiba, tani waa arrinta ku saabsan Martech. Waxaan haynaa dhammaan qalabka la heli karo si loo fuliyo ololeyaal saameyn leh, laakiin inta badan waxaan helnaa awood is-waafajin ama is-dhexgal aan is-waafaqsaneyn ama aan jirin.
Kaligey kuma lihi niyad jabkeyga. Daraasad dhowaan ay sameeyeen Golaha Warshadaha Martech, Xiriirka jacaylka / nacaybka ee Martech ayaa u xuubsiibanaya suuqleyda.
Si ka duwan dhiggooda B2C, suuqleyda B2B waxay leeyihiin xog ka badan sidii hore, laakiin kama faa'iideysan karaan inay ogaadaan macaamiishooda hab ka caawin doona inay suuq u yeeshaan si wax ku ool ah.
Doug Bewsher, Goobta hogaanka CEO
Sida ku cad Sahanka
85% suuqleyda ayaa sheegay inay ahaayeen waqti badan geliya ka badan abid maaraynta tikniyoolajiyadda suuqgeynta, at the kharashka inaad waqti geliso suuqgeyn fiican iyo la macaamilidda macaamiisha.
98% ka mid ah suuqleyda ayaa sheegay in ay doonayay macluumaad dheeri ah shaqsiyaadka iyo shirkadaha ku jira keydkooda macluumaadka.
60% suuqleyda ayaa weydiisanayay a faham dheeri ah qofka iibsadaha ah iyo qofka ay u badan tahay inuu iibsado.
In kabadan 75% suuqleyda la daraaseeyay waxay sheegeen inay doorbidi lahaayeen waqti badan sii horumarinta iyo bilaabida ololeyaal cusub oo kaliya 11% ay sheegeen inay doonayaan inay ku qaataan maalmaha shaqadooda maaraynta keydkooda.
In kasta oo suuqleyda la daraaseeyay ay sheegeen inay ogyihiin maareynta xogtooda inay muhiim u tahay guusha, inta badanna waxay qireen inay waqti yar ku qaataan sida ugu macquulsan ee ay wax kaga qabanayaan. Suuqleydayaashu waxay raadinayaan hab ay otomaatig uga dhigayaan xogta iyo habka ururinta sirdoonka oo ay u adeegsadaan inay ku sii shidaan hadafkooda asaasiga ah - oo ay ku ogaatay sahanku inuu yahay mid taageeraya iibka iyaga oo soo saaraya tilmaamo tayo leh.
Ku saabsan Leadspace:
Madal Maareynta Dhageysiga Leadspace waxay u saamaxdaa shirkadaha B2B inay si wanaagsan ula macaamilaan oo ay u wadaan koritaan deg deg ah iyagoo u oggolaanaya suuqleyda inay helaan oo ay ogaadaan dhagaystayaashooda. Maaddaama xogta gudaha iyo dibedda ay sii bataan, Leadspace waxay adeegsataa AI si ay u siiso hal ili oo run ah dhammaan iibka iyo xogta suuqgeynta, aqoonsashada koontooyinka cusub iyo shakhsiyaadka saafiga ah, oo kugula talinno howlaha suuqgeynta ugu wanaagsan. Lagu cusbooneysiiyay waqtiga-dhabta ah, xogta iyo sirdoonka ayaa had iyo jeer ah kuwo sax ah oo waxqabad leh waxaana si joogto ah loogu isticmaali karaa guud ahaan iibka, suuqgeynta, iyo kanaalada xayeysiinta
Tags: Datahogaankasahaminta suuq geyntatikniyoolajiyadda suuqgeyntahalgankaGolaha Warshadaha Martechsahanka martech
Hawsha: Waa Waqtigii La Bixin Lahaa Hawlaha Suuqgeyntaada
Hagaajinta xogtaas waa inaysan ku qaadin maalinta oo dhan, waxayna calaamad u tahay inaad ka shaqeyneyso sawirro yaryar halkii aad meheraddo waaweyn ku lahaan lahayd meheraddaada. (Tan waan u arkaa maxaa yeelay aniga sidoo kale way i dilaysaa.) Hagaajinta xogtaas waa inay dhowr jeer isku dayday fiverr ama ciddii ku hagaajin lahayd khidmad u dhigma marka la barbar dhigo waxa waqtigaagu kuu qalmo. Waxaan tan u qorayaa inaan is xasuusiyo. Waad ogeyd sida loo hagaajiyo, qof kale ayaa qabtay shaqadii "kaliya" ee aad taqaanay sida loogu sheego iyaga oo waxaad siisay wixii ay weydiisteen, waa ciyaar aan ceeb lahayn. Anigu waxaan ahay dambiile ugu xun ee wacdigayga. (Marwalba waan kafiican karaa, ama kaliya waan ogahay sida loo sameeyo….
Meh. Ma aaminsani in tani run tahay Kevin. In kasta oo aan dibadda u bixin karno shaqooyinka aan caadiga ahayn, haddana tayada iyo istiraatiijiyadda dibedda looma bixin karo. Xitaa tusaalooyinka aan bixiyay, ogaanshaha sawirka weyn iyo macmiilku wuxuu ahaa waxa looga baahan yahay inaan sameeyo tifaftirka xogta ee ay ahayd inaan sameeyo.